Wareega Wareega - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Bogga ugu weyn / Soojiidashada / Wareega Wareega
Bakhaarada wareega, oo naadir ku ah Mareykanka, waa muujinta farshaxanka ee miyiga gobolka County County. Dhacdo kooban oo dhacda, bakhaarro wareegsan ayaa loo maleynayay inay ka dhaqaale badan yihiin dhisid ka badan maqsinno dhaqameed afar geesle ah maxaa yeelay waxay isticmaaleen alwaax yar. 1910, caan ka ahaanshaha xayiraadaha wareega ayaa bilaabay inuu hoos u dhaco. Dadka dhaleeceeya bakhaarada wareega waxay u arkeen inay yihiin kuwo aan ku habooneyn, nal aan fiicnayn iyo qaabab hawo leh oo leh meel banaan. Laba kayd oo wareegsan ayaa wali ku yaal baadiyaha Degmada County iyo bakhaarrada wareega ah ee ku yaal Indiana Landmarks 10 Liiska ugu Khatarsan.
Bakhaarku wuxuu ku yaalaa Degmada Rd. 460 W gudaha Vallonia. Waxaa lagu dhammeeyay 1911 Daryl Carter oo loogu talagalay George Stuckwish, bakhaarka ayaa loo qaabeeyey ka dib markii ku dhowaad Mahan wareega. Waa 60 fuudh oo dhexroor ah oo leh is-taageerid laba-gaambeel saqaf ah waxaana lagu dhisay alwaax beled maxalli ah oo laga keenay Ewing Sawmill
Tareenka dhulka hoostiisa maraSoojiidashada, Matxafyada
Warshad Biraha MedoraSoojiidashada